Asad Cusmaan Cabdullaahi oo la filayo in loo magacaabo agaasimaha NISA - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaAsad Cusmaan Cabdullaahi oo la filayo in loo magacaabo agaasimaha NISA
Asad Cusmaan Cabdullaahi. [Sawir Hore]
Garoowe-(Puntland Mirror) Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa la filayaa in ay magacowdo agaasimaha haayada NISA.
Asad Cusmaan Cabdullaahi, kaasoo u tartamay madaxweynaha Puntland ee doorashadii dhacday bishii Janaayo 2019, ayaa kamid ah dadka ugu horeeya ee la filayo in loo magacaabo booskaas, sida ilo lagu kalsoonaan karo ay u sheegeen bog wareedka Puntland Mirror.
Agaasimihii hore ee haayada sirdoonka qaranka NISA Xuseen Cismaan Xuseen ayaa iscasilay bishii Oktoobar 2018, tan iyo xilligaas booska ayaa banaanaa.
Asad oo soo noqday agaasimaha ciidamada PSF Puntland ayaa shalay oo Sabti ahayd tagay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya.
Hordhac: Guddiga KMG ah ee Doorashooyinka Puntland waa Guddi dastuuri ah oo oo loo aasaasay hirgalinta hannaanka xisbiyada badan iyo qabashada doorasho qof iyo cod ah oo ka qabsoonta dhammaan deeganada Puntland. Hawlaha Guddiga loo [...]